Encoder Modulator Vagadziri & Vatengesi | China Encoder Modulator Fekitori
ZJ3544I inyanzvi yepamusoro yekubatanidza chishandiso chinosanganisira encoding, multiplexing, scrambling uye modulation. Inotsigira 8/12/16/20/24 HDMI yekuisa, imwe DVB-C (ATSC inosarudzika) tuner yekuisa uye yakakwira 512 IP yekuisa neData1 (GE) chiteshi. Iyo inotsigirawo DVB-C RF kunze ne16 isiri-padhuze inotakura kana DVB-T / ATSC RF kunze nevasere vasiri vepedyo vatakuri, kana ISDB-T RF kunze ne6 isiri-yepedyo vatakuri, uye inotsigira 16/8/6 MPTS segirazi regumi nenhanhatu / 8/6 vatakuri kuburikidza neData2 (GE) chiteshi chekuburitsa. Izvi zvizere funct ...
Outline ZJ3542U ndeye yakakwira kuita 4K Encoder modulator. Inobatanidza encoding (H.265 / HEVC uye H.264 / AVC), multiplexing uye modulating mabasa mune imwechete standard 1U kesi. Iyo inotsigira maviri HDMI (2.0) chiteshi UHD chiratidzo chekuisa (inopisa redundancy) yekukodha, uye zvakare 2 ASI & 32 IP yekuisa ye remux. Kuti iwedzere kugona kwekutakura, inosanganisa 1 DVB-C / T inotakura kuburitsa neimwe RF chiteshi. Iyo zvakare yakagadzirirwa 4 ASI madoko ekuratidzira kunze kweRF inotakura uye IP chiteshi kuburitsa TS mu1 * MPTS. Chinhu ...
Ichi inyanzvi yepamusoro yekubatanidza chishandiso chinosanganisira encoding, multiplexing, kukwikwidza uye modulating. Inotsigira 4/8/12 HDMI yekuisa, imwe DVB-C tuner yekuisa uye 128 IP yekuisa neData1 (GE) uye Data2 (FE) chiteshi. Iyo inotsigirawo DVB-C RF kunze iine 4 padyo inotakura, uye inotsigira Data1 (GE) kuburitsa chiteshi kutsigira 4 MPTS kunze. Ichi chizere chebasa chinoita kuti chive chakanakira diki CATV musoro magumo system, uye iri smart sarudzo yehotera TV system, varaidzo system mumitambo bhawa, chipatara, ...
Chigadzirwa Pfupiso ZJ3542H / HA encoder modulator inyanzvi yedhijitari yekubatanidza iyo inosanganisira encoding, multiplexing, scrambling uye modulation. Inotsigira 8 kusvika 24 CVBS zvinopinda, imwe DVB-C / T / (T) / ISDBT tuner yekuisa uye 128 IP yekuisa kuburikidza neData1 (GE) uye Data2 (FE) chiteshi. Inotsigirawo DVB-C / T RF kunze iine 4 padyo inotakura, uye inotsigira 4 MPTS kunze kweData1 (GE). Ichi chizere chebasa chinoita kuti chive chakanakira diki CATV musoro magumo system, uye iri smart sarudzo yehotera TV system ...
ZJ3526SA inoshanda zvakanyanya uye inodhura-encoder modulator. Iyo ine 16 CVBS yekuisa ine MPEG4 AVC / H.264 Vhidhiyo encoding uye 1 DVB-C tuner yekuisa uye 8 isiri-padhuze vatakuri vanoburitsa ine multiplexing, kukwikwidza uye DVB-C modulating inosanganisirwa. Iyo inotsigira yakakwira 256 IP yekuisa uye IP (8MPTS) kuburitsa kuburikidza neData chiteshi. ZJ3526SA inoratidzirwawo neepamusoro yakasanganiswa nhanho, kuita kwepamusoro uye mutengo wakaderera. Izvi zvinogadzirika kune ichangoburwa chizvarwa CATV nhepfenyuro system. Zvinhu Zvakakosha ● 16 ...
ZJ3524 DVB-T SD & HD Encoder & Modulator ine USB
ZJ3524 HD & SD encoder & modulator yakagadzirirwa zvichibva pamagetsi evatengi ayo anobvumidza kuiswa kwemasaini / vhidhiyo mukuparadzirwa kweTV nezvikumbiro mukuvaraidza kwepamba, kutarisa kwekutarisa, hotera Dhijitari Signage, mashopu nezvimwe. AVC / H.264 encoding uye modulating kushandura odhiyo / vhidhiyo masaini kuita DVB-T RF kunze. Iyo sosi yekuratidzira inogona kunge ichibva kuSTB, satellite satellite receiver, yakavharwa-redhiyo terevhizheni makamera uye antenna nezvimwe.
HDMI DVB-C / DVB-T / ATSC / ISDB-T Encoder & Modulator DVB-C / T / ATSC / ISDB-T RF mune imwechete kifaa, Modulation ine simba yekuchinja Support CC (Yakavharwa Caption), EIA 608 Tsigira LCN Yakaderera mutengo General Tsananguro ZJ3522C HD encoder & modulator yakagadzirirwa zvichienderana nemutengi zvemagetsi zvinobvumidza odhiyo / vhidhiyo chiratidzo chekupinda mukuparadzirwa kweTV nezvikumbiro mukuvaraidza kwepamba, kutarisa kwekutarisa, hotera Dhijitari Signage, mashopu etc.Ichose-mu-chimwe chishandiso chinosanganisa MPEG2 encoding uye modulat ...